Fanatsarana ny asa fitaterana Vonona hifampiraharaha amin’ny CUA ny UCTU
Nivoaka tamin’ny fahanginana ny fivondronan’ny mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra na ny UCTU omaly.
Tsy voavono anefa ny afo izay nirehitra tao anatin’ny ora maromaro, ka niitatra tsikelikely nankany amin’ireo entana tao anaty kaontenera, ary may kila forehitra tsy nisy noraisina intsony tao anatiny izay mora mirehitra rahateo satria « bal fripérie » no tao anatiny. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Raha ny fitantaran’ny mpanampy ny mpamily, dia tsy nisy ny fifanampiana teo amin’ireo samy fiarabe nitandahatra fa navelan’ireo namana teo izy ireo raha vao vantany nitsingidina ny fiaran’izy ireo. Zava-dehibe ny tokony hametrahana ireny tavoahangy lehibe misy famonoan’afo ireny ao anatin’ny fiara, ka tokony ho hentitra ny mpitandro ny filaminana amin’ny fisavana azy ireny. Helohin’ny lalàna ihany koa ny tsy famonjena olona tra-doza eny amin’ireny lalam-pirenena ireny, ka tokony hohamafisina ny fampiharana sy ny fampianarana izany ho an’ny mpitatitra sy ny mpampiasa fiara.